रिक्सीओस होटेल नेटवर्क हीरा हिरास्रक पत्रिका
अभावको आवाजबाट ब्रेक लिन, समुद्री तट छनौट गर्न, जहाँ तपाईं शहर हलचलबाट विचलित हुन सक्नुहुन्छ। सही छनौटले टर्कीमा सबै भन्दा राम्रो होटेलको सूचीमा मद्दत गर्दछ, जसमा राम्रो सेवाको साथ होटल र चाखलाग्दो मनोरन्जन कार्यक्रम संकलन गरिन्छ। टर्की सीमाना चारजना समुद्रहरू लिएर धोइन्छ, त्यसैले रिसोर्ट छनौट गर्दा यो व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू निजी प्राथमिकताहरूबाट विश्रामको लागि उपयुक्त छ।
<< p> एन्टियाको रिसोर्ट शहर एन्टी इन्टियाको तटमा रहेको भूमध्य सेल्टमा प्रेमीहरू मनपर्दो एक छुट्टी अधिकतम प्रभावहरूमा फिट हुन चाहन्छ। स्थानीय रिसोर्टहरू टर्कीमा होटेलहरूको रेटिंगले बोलेको छ, किनकि सेवाको स्तर सधैं उच्च हुन्छ।
डाइभिंग, आकर्षक शपिंग र पाकन्टर्स तपाईंको पर्खाइमा। एन्टिलेमा धेरै आकर्षणहरू छन्। भव्य झरनालाई आउनुहोस् प्रकृतिको महान प्रकृतिको प्रशंसा गर्न र पार्क लघु मिनी-शहरमा जानुहोस्, जहाँ प्रसिद्ध स्थानहरूको सानो प्रतिहरू संकलन गरिन्छ।
kemer sediteraranan समुद्रको किनारमा अवस्थित छ, जुन को सब भन्दा आराम किनाराहरू टावरमाई हिमालीहरूको पर्खाल द्वारा कभर गरिएको छ। पूर्वाधारको अतिरिक्त, रिसोर्टले समृद्ध भ्रमण कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। केमरमा आराम गर्दै, फेीक्की शहर एन्टिक शहर हेर्नुहोस्, यातार्टशको जलाउने पहाडहरू प्रशंसा गर्नुहोस् र नदीमा नदीको खुट्टामा बग्न थाल्यो।
बारट होटेलहरू नासाभावनाको रोमाञ्चक छुटको साथ, साथै यसको गुणवत्ता, मैत्रीपूर्ण र रचनात्मक रूपमा आश्चर्यचकित भएको छ।
BRAT ईन्स्टा 1 1971 1 मा गोप्य स्वर्गबाट ​​शुरू भयो जहाँ समुद्रीमा मात्र पुग्न सम्भव थियो। पहिलो वस्तुले भौगोलिक स्थिति अनुसार यसको नाम प्राप्त भयो: सिनेट ("प्रमोदवन")। Acanthusus यस शीर्षकमा थपियो, र होटलले आदर्श वाक्यको "सरल सतर्कता" अन्तर्गत काम गर्न थाले। त्यसो भए हेमेरा, आमर र ब्याटल LaR ... नयाँ नायक जसले मानिसहरूलाई खुशी पार्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए: र
Acanthus र केन्द्रन होटल, "हार्ड", "लारा" र "केमर" लाई पाहुनाहरूलाई भिसा, सुरुचिपूर्ण र पूर्ण नयाँ शैलीलाई भेट्नुहोस्।
बरु राम्ररी सोचेको नयाँ अवधारणामा, जसमा सबै विवरणहरू प्रदान गरिएको छ र यसलाई फिर्ता गर्न चाहन्छ भने सबै तपाईंको लागि पर्खिरहेको छ। बार्द संग्रह होटेलमा। "धेरै ठूलो आकारमा", र असीमित अवधारणाको साथ छुट्टै अवधारणाको साथ छुट्टी भन्दा बढी भन्दा बढी।
dedeman होटेल टर्कीको सबैभन्दा पुरानो होटल चेन हो। हाल, डीदी होटलहरू डेडमैन समूहको डिभिजन हो - परिवार व्यवसाय होल्डिंग, टर्कीको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक संघ र वित्तीय संघ मध्ये।
पहिलो DEDEMAM AKARA होटेल, 1 66 6666 मा अंकरामा निर्माण गरिएको थियो। आज, नेटवर्कमा - 1 19 होटलहरू, टर्गारीमा, सिरिया, अजबकिस्तान र मा। दीदल होटेल योजनाहरू इरान र अजरबैजानमा नेटवर्क होटलहरू हुन्।
डेडमम्यान होटेल होटल नेटवर्कको सक्रिय विकास एक साथ टर्कीमा टर्कीमा टर्कीमा टर्कीमा टर्कीको शुरुवात भएको छ। यस वर्ष, होटेल व्यवसायमा निर्माण र लगानीको व्यवस्थापन डीडम्यान पर्यटन लगानीकर्ताको कर्पोरीमा सारियो। 2001 सम्म, टर्कीमा डेडेनम्याट होटलहरू मात्र होटलहरू व्यवस्थित गरे। डेडेनम्यान अक्ष्रा होटेलको अतिरिक्त तिनीहरू डेडमम्यान इटेटनबू होटेलमा 1 198 22 मा र 1 198. In मा खोलिए।
dedeman होटेल होटल चेन टर्कीको पहिलो होटल चेन बन्न पुगेको छ जसले देश बाहिर विकास गर्न शुरू गर्यो। 2002 मा, कम्पनीले विदेशमा होटलहरूको व्यवस्थापनका लागि पहिलो सम्झौताहरू सम्पन्न गर्यो।
विश्लेषणको लागि विश्लेषण 200 2008 थियो। तब कम्पनी सिरियाको सब भन्दा राम्रो होटेल मध्ये एकमा आफ्नो ब्रान्ड अन्तर्गत सेवाहरू सबमिट गर्न सक्षम थियो। होटल नेटवर्क लेडल लेडिकल ले मेडिकल होटल Lirass मा दमास्कस होस्टेन द्वेषीय दमास्कस डेडम्यान होटेलले भने। आज, होटल डीडम्यान होटल दैवास्कस सिरिया भनेर चिनिन्छ। थप रूपमा, उही 200 2008 मा, डेडम्यान होटलहरू दुईवटा बेलभिया होटेलमा प्रवेश गरे - सोफिसिड र डेडवम्यान होटेलमा डीभम्यान होटेलमा।
dedeman होटेल होटलहरू मध्यम वर्ग क्षेत्र र लक्जरी क्षेत्रमा उपलब्ध छन्। कम्पनीको पोर्टफोलियोमा - दुबै लक्जरी पाँच-स्टार होटेलहरू र परिवार-मैत्री होटेल होटल र व्यापार। डेडम्यान होटेलहरू टर्कीको समुद्र रिसोर्टमा व्यापक रूपमा प्रतिनिधित्व गरिन्छ। नेटवर्क होटलहरू, एन्टिले ,. उसको होटल टर्कीका ऐतिहासिक शहरहरूमा फेला पार्न सकिन्छ (किनी कन्या होटल र कोनीको गोरनर कन्भेन्सन सेन्टरका साथै टर्की पान्जामरमेड स्कीर पाण्डुड स्कीट स्कीट स्कीड स्कीड स्कीम लज)।